व्यक्तिहरू किन अनलाइन समीक्षा लेख्छन्? | Martech Zone
व्यक्तिहरू किन अनलाइन समीक्षा लेख्छन्?
सोमवार, जुन 18, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
यदि तपाईं अनलाइन समीक्षा ठूलो सम्झौता होईन सोच्नुहुन्न ... केवल हाम्रो ग्राहक, एन्जीको सूचीमा हेर्नुहोस्, अब एक सार्वजनिक कम्पनी कडाईका साथ विशाल, उच्च गुणस्तरको डाटाबेसमा आधारित छ। विश्वसनीय समीक्षा। र तथ्य यो हो कि तिनीहरूले अज्ञात समीक्षा वा गैर-भुक्तान गर्ने सदस्यहरूको समीक्षालाई अनुमति दिदैनन् ट्रोलहरू र चेटरहरूलाई अविश्वसनीय अनुभवको लागि बाहिर राख्छन्। उनीहरूका ग्राहकहरु उनीहरुलाई माया गर्छन्। उनीहरुलाई सोध्नुहोस्।
हालसालै, यस्तो देखिन्छ कि अधिक र अधिक उपभोक्ताहरू अनलाइन समीक्षा साइटहरू, फोरमहरू र अनुप्रयोगहरूमा उनीहरूले अनुभव गरेका सेवाहरूको बारेमा आफ्ना विचारहरू साझा गर्न आएका छन्। तर यो बाहिर को रूप मा, सबैलाई बिन्दु वा freebies द्वारा पूर्णतः संचालित छैन।
यदि तपाईं कम्पनी हुनुहुन्छ, विशेष गरी एक स्थानीय। र समीक्षाको साथ तपाईं आफ्नो प्रतिष्ठा अनलाइन निरीक्षण गरिरहनु भएको छैन भने - यसले धेरै कुरा वर्णन गर्दछ। यदि तपाईंसँग समस्याग्रस्त समीक्षा छन् भने, तिनीहरूले तपाईंको बिक्री तल तान्नेछन्। उपभोक्ताहरूले समीक्षा समीक्षा मनपराउँदछन् र प्रत्येक दिन खरीद निर्णयहरूमा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाइँको समीक्षा पूर्ण हुनु हुँदैन, तर तिनीहरू भरपर्दो र राम्ररी लेखिएको हुनुपर्दछ। यदि तपाईंसँग केहि रूख व्यक्तिहरू छन् जसले तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरू राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दैन भने, तपाईं तिनीहरूलाई प्रेम गर्ने ग्राहकहरूबाट अनुरोध गर्दै काममा जान चाहनुहुन्छ।
यहाँबाट केहि महान तथ्या .्कहरू छन् डिमांडफोर्सबाट इन्फोग्राफिक समीक्षामा:
टैग: डिमांडफोर्सअनलाइन समीक्षासमीक्षा
के सामाजिक प्रभाव पार्ने खोजी रैank्क हो?
भ्यालेरी जोय डेवेजा
जुन 18, 2012 मा 9: 31 PM
अनलाइन समीक्षाहरू कम्पनीहरूलाई ड्राइंग ढोकामा फिर्ता ल्याउन र तिनीहरूको मार्केटिङ रणनीतिहरूको पुन: परीक्षण गर्ने निश्चित-आगो तरिका हो। के काम गर्छ हेर्नुहोस्, र कुन छैन हेर्नुहोस्। मलाई लाग्छ कि मानिसहरू अनलाइन समीक्षाहरू लेख्न आकर्षित हुन्छन् किनभने हामीले भर्खरै सामना गरेको कुनै पनि राम्रो कुरा साझा गर्न मन पराउँछौं, वा हामी केवल अरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं यदि यो केहि खराब छ भने। यो जहिले पनि जडान र साझेदारी गर्न मानव आवश्यकता संग फिर्ता जान्छ।